Taa, a kpọrọ Maoheng Machinery isonye na ngosipụta nri ma zute ọtụtụ enyi nwere ike ịkwado.
site ha na 19-09-23
Hebei Maoheng Machinery Co., Ltd. bụ ihe enterprise aku nnyocha na mmepe, n'ichepụta, ahịa na ọrụ nke mkpụrụ nhazi akụrụngwa na ọka grading equipment.The ụlọ ọrụ nwere elu ụlọ mmepụta ihe, oge a na mmepụta ngwá na elu-edu, elu-arụmọrụ azụmahịa arụmọrụ te ...
site ha na 19-01-23
Maoheng igwe ụlọ ọrụ mgbe-sales ọrụ otu egwuregwu na-eleta ndị ahịa ugbo na-ekwu okwu banyere mkpụrụ ihicha igwe. Akụrụngwa bụ nnukwu ikike, nkenke dị elu, igwe nhicha igwe na igwe anaghị agbaji agbaji, usoro nhicha uzuzu abụọ, sistemụ ikuku abụọ, vibrat ...
Taa, a nwalere igwe ihe eji emepụta uzuzu ya na sistemụ mkpofu n'ugbo ndị ahịa, ezigbo mma na ogologo ndụ, ọ bara uru ịtụkwasị obi.
site ha na 19-01-15
Taa, a nwalere igwe ihe eji emepụta uzuzu ya na sistemụ mkpofu n'ugbo ndị ahịa, ezigbo mma na ogologo ndụ, ọ bara uru ịtụkwasị obi. The 5XZC usoro ikuku ihuenyo Cleaner bụ a isi ihicha akụrụngwa ijikọta ikuku nkewa na screening.The ikuku nkewa ọrụ nke igwe bụ m ...